Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games 9.4.3051 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.4.3051 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games
Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ယနေ့ Candy Charm ကစား Start - 5.000.000 ကျော်သကြားလုံး charmers this🔥ထိပ်တန်းပွဲစဉ်3ပဟေဠိဂိမ်းကစားခြင်းကြသည်! 2000 ကျော်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူပျော်စရာကြိတ်ခွဲ၏နာရီပေါင်းများစွာပျော်မွေ့!
သကြားလုံး Charm အခမဲ့ကြီးတွေ🎁နှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်ဦးစွဲလမ်းပွဲစဉ်ပဟေဠိဂိမ်းနေ့တိုင်းဆုပါ! မတူညီတဲ့ဂိမ်းသော့ဖွင့်ဖို့သကြားလုံးနှင့်အကြားကိုက်ညီ & နှိပ်စက်ဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သကြားလုံးနတ်သမီးပုံပြင်ကူညီပေးနေ, မှော်သကြားလုံးနိုင်ငံတို့ Exploring! 👏
WIFI မပါဘဲအချိန်ကိုသတ်လိုပါသလား? နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအခမဲ့ဆုလာဘ်တောင်းဆိုလိုပါသလား? အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရနိုင်သူကိုကြည့်ဖို့မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်လိုပါသလား? ယခု Candy Charm ကစား Start! 🎉
🍭2,000 + ကိုစှဲပွဲစဉ်-3 အဆင့်ဆင့်
သကြားလုံး Charm 2000 ကျော်အဆင့်ဆင့်ရှိပြီးလစဉ်သစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်
နေ့စဉ်ဆုကြေး, ဒါပေါ်ဘီး, မင်္ဂလာနာရီ, Sweet မစ်ရှင်, Sweet ရယူထားသောနှင့်လှည့်ဖျား
🍭 Sync ကိုဂိမ်းဒေတာအခါတိုင်း / အချိန်မရွေး
ကွဲပြားခြားနားသော device များအကြားသင့်ရဲ့ဂိမ်း data တွေကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကစားအချိန်မရွေး
ကွဲပြားခြားနားသောအံ့သြဖွယ်ဂိမ်းမြေပုံများနှင့်အသစ်သောဒီဇိုင်းများနှင့်အတူအရသာဂျယ်လီ & တွင်းသကြားဓာတ် & ဆော် & သကြားလုံး
သင် Quest များဖြေရှင်းကူညီနိုင်သည့်7အစွမ်းထက် Boosters ရှိပါတယ်
●သူတို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့လိုင်းအတွက်ပွဲစဉ်3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအလားတူသကြားလုံး။
●ပွဲစဉ်ညွှန်ကြားမှုအထူးသကြားလုံးဗုံးကိုဖန်တီးရန်4ပဟေဠိအပိုင်းပိုင်း။
●မှော်သကြားလုံးကိုဖန်တီးရန် T ကသို့မဟုတ် L ကိုအတွက်ပွဲစဉ်5။
●အဆင့်တွင်ပိုမိုကြယ်များရရှိရန်လျော့နည်းရွေ့လျားနှင့်အထူးသကြားလုံးပို combo ကိုသုံးပါ
သကြားလုံး Charm ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့် In-ဂိမ်းပစ္စည်းများအချို့ငွေပေးချေမှုလိုအပ်သည်။
https://www.facebook.com/playcandycharming/: Facebook တွင် Candy Charm Follow
Instagram ကိုအပေါ် Candy Charm Follow: https://www.instagram.com/candycharmingfun/
အကြံပေးချက်များသည် Candy Charm က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုလိုက်နာပါ: www.candycharming.com
👏သင် Candy Charm join ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား 2019 ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုက်ညီသကြားလုံးဂိမ်းများကိုစမ်းကြည့်ပါ!
Candy Charm ကစားပျော်စရာရှိသည်!
Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 7.84k 6.76M
Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.4.3051
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://sites.google.com/site/gameoneprvacypolicy/
App Name: Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games
Release date: 2019-07-12 18:22:44
လက်မှတ် SHA1: 35:77:9A:6E:25:48:E0:50:B8:39:66:6A:B8:A8:31:BB:E0:BC:B1:1B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): candycruiseswap
Candy Charming - 2019 Match3Puzzle Free Games APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ